Korea Atsimo, ampangaina ho mamerina manoratra tantara vaovao ho an’ny boky fampiasan’ny lisea · Global Voices teny Malagasy
Ireo mitàna ny fahefana no tokony hatahotra ny tantara
Voadika ny 26 Jolay 2020 6:13 GMT
Sary an'i Kopachris, Deviant Art (CC BY-NC-SA 3.0)
Bokin-tantara iray mpitahiry ny nentindrazana, ampiasain'ny lisea ao Korea Atsimo, niteraka resabe nandritra ny herinandro maro tao amin'ny firenena satria namadika ny ampahany sasany ao anatin'ny tantara, toy ny fanjanahana nataon'ny Japoney, ho lasa zavatra miabo ka niampangàna ny governemanta ho manome vàhana ireo boky izay manohana ny faharesendahatra politikany sy mandambolambo fomba fijery mahafinaritra kokoa amin'ireo vanimpotoana samihafa tao anatin'ny tantara.
Tsy hoe fotsiny notefotefohana noho ny tsy maha-marina azy ilay bokin-tantara navoakan'ny Kyohak Publishing Co, fa koa noho ny fanadiovany ireo tsy fetezanjavatra vitan'ireo vondrona sasantsasany mpahazo tombontsoa tamin'ny lasa. Lazain'ireo mpanakiana fa henjana raha ny habetsahan'ny hadisoana – mihoatra ny 750 – hita ao anatin'ilay boky, ka ampy hanilihana azy tsy ho toy ny fitaovana entina mampianatra eken'ny rehetra.
Maro ireo ray aman-dren ysy mpianatra nanohitra mafy an'ireo sekoly marobe nanaiky ny hampiasa io boky navoakan'ny Kyohak io ary nahavita nanafoana ilay fanapahankevitra nony farany. Na izany aza, ny Ministeran'ny Fampianarana dia nanolotra fialantsiny ho an'ireo mpanonta boky, voalohany indrindra tamin'ny filazana fa tsy io no dika farany amin'ilay boky. Na taorian'ny namborahana aza fa hoe mbola tsy narahan'ny Kyohak ihany ireo fanitsiana takiana amin'ilay boky fianarana, ary ny dika farany nasiana fanitsiana dia nahitàna hadisoana miisa 350, dia neken'ny ministera indray ilay izy avy eo, niaraka tamin'ny filazàna fa mbola dika andrana ihany io. Araka ny tatitra avy ao an-toerana, mpahay tantara iray no niteny fa [ko] “tao anatin'ny 22 taona naha-mpampianatra tantara azy, tsy mbola nandre velively izy zavatra tahaka izany hoe “boky dika andrana” izany, ary nahatankina azy ny fanambaràna nipoapoaka nataon'ny ministera.”
Midadasika be ny fiantraikan'ireo [ko] hadisoana: ireo famaritana mamitaka nomena ny fifehezan'ny amperoran'i Japàna an'i Korea, ireo anarana diso amin'ny sarintany, ary ireo fanambaràna diso manao hoe i Etazonia dia nanana zanatany tao amin'ny faritr'i Indôshina. Hadisoana iray hafa mivandravandra ny fahitàna famaritana iray diso momba ny rain'ny filoha Park Geun-hye, ilay miaramila mpanao jadona efa nodimandry Park Chung-hee: ambaran'ilay boky fianarana fa ny salan-karaman'ny ankamaroan'ireo Koreàna dia nahatratra 10.000 dolara amerikàna teo ambanin'ny fitondràny, nefa tokony ho 1.000.
Lazain'ilay boky ihany koa fa ireo ambara ho vehivavy mpanala sorisory – tovovavy na efa ramatoa, izay ny ankamaroany dia Koreàna, noteren'ny Ampiran'i Japàna hivaro-tena nandritra ny Ady Lehibe Faharoa mba “hanala sorisory” ireo andian-tafika – “nanaraka ireo miaramila japoney tany rehetra tany”, nahatonga azy ireny nisafidy ny hanompo an-tsitrapo ny tafika noho ny resaka vola. Misy aza hadisoana ahiahiana ho nalaina avy aminà lahatsoratra tanaty bilaogy tety amin'ny aterineto.
Vao haingana ny New York Times no nanampy trotraka tamin'ny alàlan'ny matoandahatsoratra nitondra lohateny hoe “ireo Politisiàna sy ireo Boky fampianarana” ka tao anatin'izany ilay gazety dia niampanga ny filoha Park ho manamaivana ny fiarahana miasa misy amin'ny Koreàna sy ireo imperialista Japoney nandritra ny fanjanahan'i Japàna an'i Korea teo anelanelan'ny 1940 sy 1945. Nofehezin'ny toniandahatsoratra tamin'ny hoe “atosik'i Park, iarahany amin'ny filoha japoney Shinzo Abe, ny hanànana boky fampianarana eny amin'ireo lisea ao amin'ny fireneny, boky naveriny nosoratana hifanaraka amin'ny fijery politika ananany.” Namaly bontana ny Ministeran'ny Raharaha Ivelany ao Korea, tamin'ny filazàna fa “hanao dingana maromaro izy hanenjehana ny New York Times noho ireo fandisoana ny zavamisy.”
Toy ireto ambany ireto ny fanehoankevitr'ireo Koreàna feno hatezerana:
Tsy misy azo anasokajiana ilay boky navoakan'ny Kyohak Publishing afa-tsy ny hoe bokikely fampielezankevitry ny Saenurin, antoko eo amin'ny fitondràna.
Rehefa avy nijery ny antsafa nataon'ny filohan'ny Kyohak Publishing Yang Cheol-woo tao amin'ny vaovao an-tsarin'ny JTBC Sohn Suk-hee, dia vitako tanteraka ny nahita ny fomba nahaterahan'ity fakom-boky mpiandany amin'ny Japoney imperialista ity. Tohizany ny filazàna hoe tsy misy tsininy na kely aza ilay boky nataon-dry zareo ary io no hany boky tena akaiky indrindra ny zavanisy. Nampangainy mihitsy ho mitongilana mankany amin'ny “ankavia” aza ireo boky sasany.
Misy ireo ahiahy hafa mipongatra arakaraky ny nivoahan'ireo tatitra [ko] hoe avy hatrany taorian'ny nandavan'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ilay bokin-tantara navoakan'ny Kyohak Publishing, natomboky ny governemanta sy ny antoko eo amin'ny fitondrana ny faneriterena momba ny hanontàna ilay boky sy ny hanerana ny fampiasàna azy manerana ny firenena. Amin'izao fotoana izao, manana ny teniny amin'ny dingana fisafidianana ny boky fampianarana ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny ary mpampianatra , ary manana safidy manoloana ireo boky marobe isankarazany. Nampangain'ny avy amin'ny antoko mpanohitra ilay hetsika [ko], ho toy ny ezaka hanemporana ireo fomba fijery tsy mitovy amin'ny an-dry zareo mpitondra, ary nanehoan-dry zareo hevitra hoe ny rafitra boky-tokana-mety-ho-any-rehetra dia zavatra iray tena ankafizin'ireo mpitondra mpanao jadona izay afaka ny hilalao amin'ny fomba tsotra ny votoaty ao anatiny. Mety ho i Korea Avaratra sy Rosia no tranga tena azo asongadina amin'ny resaka rafitra boky tokana ho an'ny firenena iray manontolo.
Rehefa tsinjon-dry zareo fa tena nahiliky ny mpianatra, ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra ilay bokin-tantara navoakan'ny Kyohak, ny fomba tsara indrindra hamaliana an'izay dia ny mitodika any aoriana mijery ny hadisoana sy mahalàla menatra ary miala tsiny. Saingy ahoana no nataon-dry zareo? Toy ny hoe miketrika valifaty ry zareo, tereny ny hikisahana hampiasàna ilay rafitra boky tokana fampianarana ho an'ny rehetra. Tena fanaovana tsinontsinona tanteraka ny tantara izany ary tsy fanajàna ny vahoaka.
Ilay henoin-teny ao amin'ny Twitter sady mpahay tantara, Jeon Woo-yong (@histopian) dia nibitsika andiana hafatra maromaro momba io olana io:
Na ny fitondran'olontokana fony fanjakan'ny dinastia Joseon aza tsy nitsabatsabaka mihitsy tamin'ny asan'ireo mpandalina ny tantara. Ireo mitàna ny fahefana no tokony hatahotra ny tantara, fa tsy ny tantara mifikitra amin'ny fahefàna. Ny antony mahatonga ireo mitàna ny fahefana mitady izay hifehezana ny tantara dia, na satria ry zareo menatra hiatrika ny tantara, na ry zareo tsy miezaka akory hanao izay tsy hahatsapan'ny tenany hoe menatra’.